We Fight We Win. -- " More than Media ": အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ ၂၀၁၂ ၀င်ငွေခွန် အိမ်ဖြူတော် က ထုတ်ပြန်
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ ၂၀၁၂ ၀င်ငွေခွန် အိမ်ဖြူတော် က ထုတ်ပြန်
The White House released President Obama's 2012 tax records today. The president and first lady reported paying $112,214 in taxes on $608,611 of adjusted gross income. အမေရိကန် မှာ အလုပ်လုပ်သူ တိုင်း ၀င်ငွေခွန် ဆောင်ရတယ်။ သမ္မတ က အစ အစိုးရ အဖွဲ့ ၀င်တွေ အားလုံးဟာ လူထု သိအောင် မိမိ တို့ရဲ့ ၀င်ငွေ နှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေ ကို နှစ်စဉ် ကျေညာပေးရပြီး၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား အခွန်ဆောင်ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ ၀င်ငွေ မဆောင်သူဟာ ရာဇာဝတ်မှုထက် အပြစ်ကြီးတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမား နှင့် ဒုသမ္မတ ဘိုင်ဒန်တို့ ရဲ့ ၂၀၁၂ ၀င်ငွေခွန် ကို အမေရိကန် ပြည်သူသိရှိ အောင် အိမ်ဖြူတော် က ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန် ပေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ နှင့် သမ္မတ ကတော် နှစ်ဦးပေါင်း ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၀င်ငွေ ၆၀၈,၆၁၁ ရှိခဲ့ပြီး၊ ၀င်ငွေ အခွန် ၁၁၂,၂၁၄ ပေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။